IPOLISI YABUCALA NESILUMKISO SOMTHETHO | Oxford isiXhosa Living Dictionaries
Ikhaya IPOLISI YABUCALA NESILUMKISO SOMTHETHO
Le polisi yabucala yeyale webhusayithi ngokukhethekileyo ethi oxforddictionaries.com ("iWebhusayithi") needomeyni zayo ezingaphantsi yaye zilawula ukusebenzisa kwakho le Webhusayithi needomeyni zayo ezingaphantsi.
I-Oxford University Press ("i-OUP", "thina", "sonke" okanye "eyethu") izinikele ekukhuseleni ezabucala zakho kwi-intanethi. Le polisi yabucala icacisa indlela esiza kukwenza ngayo oku. Siza kuyihlola le polisi yabucala ngokwamagqabaza esiwafumanayo ngoko nceda uhlole uhlobo lwakutshanje. Ukuba unayo nayiphi imibuzo ephathelelele le polisi yabucala, nceda usiqhagamshele.
Ngokusebenzisa iWebhusayithi, uyazivuma izinto ezichazwe kule nkcazelo.
Luhlobo olunjani lwenkcazelo esiluqokelelayo yaye silusebenzisa njani?
Xa utyelela le Webhusayithi, i-OUP ingaqokelela inkcazelo neenkcukacha ezibandakanya inkcazelo yakho yobuqu. Inkcazelo eqokelelweyo iza kuquka inkcazelo enxulumene nokuziphatha kunye nokhangelo lwakho olwenze kwiWebhusayithi. Le nkcazelo isivumela senze uphando lwangaphakathi kumdla wabasebenzisi, iingingqi nokuziphatha ukuze siqonde ngakumbi, size kwelinye icala, sinikele inkcazelo engcono, iimveliso neenkonzo kuwe nabanye abathengisi.
Ukuba uyabhalisa njengomsebenzisi weWebhusayithi okanye ucela inkcazelo engakumbi malunga neWebhusayithi, siye sicele igama lakho, iadresi yeimayile, iadresi yokuposa, nenye inkcazelo ebalulekileyo yobuqu. Inkcazelo yobuqu enikelwa ngolu hlobo iye ifakwe kugcino lofikelelo lwethu lolawulo, lusingathwa yenye inkampani, nakugcino lwabathengi bethu be-OUP kunye/okanye kwizakhiwo zamaqabane ethu. Le nkcazelo iza kuhlaziywa xa usichazela ukuba senze naluphi utshintsho kuyo.
Ukuba ungumsebenzisi obhalisiweyo, inkcazelo yakho yobuqu iza kusetyenziselwa ukuze ibe sisiqinisekiso sokuba ungumsebenzisi obhalisiweyo kunye nokukuthumelela isiqulatho nosetyenziso olungavumelekanga kwiWebhusayithi.
Ukuba usayinela ukufumana amaphephandaba, siza kucela iadresi yakho yeimeyile negama lakho yaye le nkcazelo iya kongezwa kugcino lwethu lwabathengi.
Ukuba ufaka isiqulatho kwiWebhusayithi, singayibonisa iprofayile yakho (oko kukuthi, igama lakho nelizwe lakho) kwiWebhusayithi.
Singayisebenzisa le nkcazelo ekugcino lwethu ukukuthumelela ngokwe-elektroniki okanye ngenye indlela inkcazelo malunga nathi, amaqabane ethu, iimveliso neenkonzo zethu, kunye neemveliso neenkonzo zamaqabane ethu esicinga ukuba zingabangela umdla kuwe.
Siye sicele inkcazelo yakho yobuqu (enjengegama lakho, iadresi yeimeyile nezinye iinkcukacha zoqhagamshelwano) xa usiqhagamshelela ukusibuza ngolawulo lweakhawunti yomsebenzisi obhalisiweyo, iingxaki zobugcisa, ukugqabaza kwiWebhusayithi, okanye ukuba ufuna inkcazelo ngendlela yokusebenzisa iimveliso kunye/okanye iinkonzo ezikhoyo kwiWebhusayithi. Inkcazelo yobuqu efakwe nguwe kwiphepha elithi-"siqhagamshele" ayiyi kufakwa kugcino lwethu lwabathengi yaye siyicelela nje ukuze sikuphendule kumbuzo wakho. Ubalo ngokuphathelele iintlobo zemibuzo ethunyelwe kuthi kwiphepha elithi "siqhagamshele" lusenokuthelekiswa sithi ngokwendlela yalo ukuze siyiqwalasele ngokuphumelelayo iWebhusayithi size siphucule izinga lenkonzo.
Ukuba kwixesha elidlulileyo uye wacela inkcazelo okanye uye wabhalisa kwiWebhusayithi (yaye uye wayivala iakhawunti yakho yomsebenzisi) ibe awunqweneli ukuba sigcine inkcazelo malunga nawe, nceda usiqhagamshele yaye siza kuzisusa iinkcukacha zakho kugcino lwethu lwabathengi. Kufuneka sigcine inkcazelo yabasebenzisi ababhalisiweyo bangoku ukuze sikunike ufikelelelo lwesiqulatho nosetyenziso oluvalelweyo olukwiWebhusayithi.
Ungasazisa ukuba akuvumi ukuqhagamshelwa ngokwalendlela ichaziweyo. Ukuba usebenzisa iadresi yeimeyile engaphezu kwenye ukuqhagamshelana nathi, nceda usazise ngeakhawunti yeimeyile nganye oyisebenzisayo.
Sabelana nini ngenkcazelo?
Asiyithengiseli mntu inkcazelo yakho yobuqu.
Inkcazelo yakho sabelana ngayo phakathi kwi-OUP. Sikwabelana ngenkcazelo yakho namaqabane ethu, abaniki layisenisi nabanikezeli beenkonzo, abasincedisa ekwenzeni iWebhusayithi ifumaneke kuwe (umz. abasingathi bethu).
Uninzi lwezinye iiwebhusayithi zineelinki zeWebhusayithi yethu. Ukuba utyelela nayiphi kwezo webhusayithi, bangayiqokelela inkcazelo. Iwebhusayithi ezinjalo asikwazi kuzilawula yaye azigutyungelwa yipolisi yabucala. Ezi webhusayithi zisenokuba neepolisi zabucala zazo ibe asikwazi kwamkela nayiphi imbopheleleko nokuphazanyiswa kwezo polisi. Nceda uhlole ezo polisi ngaphambi kokufaka nayiphi inkcazelo yobuqu kwezo webhusayithi.
Ukuba sikholelwa ukuba ukusebenzisa kwakho le Webhusayithi akukho mthethweni okanye kuyonzakalisa kwabanye, sinelungelo lokuyiveza inkcazelo yakho esiyifumene kwiWebhusayithi engawe kwabanye abantu ukuba kunyanzelekile senze njalo ngokoluvo lwethu ukuze sithintele, silungise okanye sithathe amanyathelo anxulumene noko kuziphatha.
Singayiveza okanye sabelane ngenkcazelo yakho yobuqu ukuze sithobele nayiphi imbopheleleko engokomthetho; ukuze sinyanzelise okanye senze izivumelwano okanye iilayisenisi nawe; okanye sikhusele amalungelo, izinto, okanye ukhuseleko lwe-OUP, abasebenzi bethu, amaqabane, abaniki beelayisenisi, abanikezeli ngeenkonzo, kunye/okanye abathengi bethu. Oku kuquka ukwabelana ngenkcazelo kunye nezinye iinkampani neentlangano ngeenjongo zokuzikhusela kurhwaphilizo nokunciphisa iingozi zamatyala.
Ukuba nayiphi inxalenye yenkampani yethu (kuquka nezo zingamaqabane ethu) ithengisiwe okanye iye yadibana nenye inkampani, iinkcukacha zakho zingavezwa kubacebisi bethu nakwabo banokuba ngabathengi nakubacebisi babo.
I-OUP isebenzisa "iikuki" nobunye ubugcisa obukwiWebhusayithi. Imimiselo nemiqathango elawula ukusetyenziswa kwee”kuki” ze-OUP nobugcisa obufana nobu kwiWebhusayithi ichazwe kwiPolisi yeKuki ye-OUP. IPolisi Yekuki ivela ngesiNgesi. Nceda usiqhagamshele ukuba ungathanda ukuyifumana ngolunye ulwimi.
Ngokusebenzisa le Webhusayithi, uvuma uzibophelela kwimimiselo yePolisi yethu yeKuki.
Enye yenkcazelo yakho yobuqu igcinwe kwiziko logcino elilawulwa yenye inkampani yethu esingathayo. Iziko logcino elilawulwa yenye inkampani yethu esingathayo ngokukhethekileyo yenzelwe ukuba ibe nokhuseleko lobuqu yaye kungena abantu abagunyazisiweyo kuphela, ababophelelekileyo ukuba bagcine yonke inkcazelo yethu iyimfihlo.
Ufikelelo kugcino lwethu lwabathengi lunikezelwa kuphela 'ngokolwazi oluyimfuneko'.
Inkcazelo esiyiqokelelayo kuwe ingadluliselwa, ize igcinwe, kwindawo ekude ekwiNgingqi yoQoqosho yaseYurophu. Isenokudluliselwa nangabasebenzi abasebenza ngaphandle kwe-EEA abasebenzela thina, amaqabane ethu okanye abanye babanikezeli nkonzo bethu. Noko ke, siye sathatha amanyathelo achazwe apha ngasentla ngokuthi sizame ukuphucula ukhuseleko lwenkcazelo yakho. Ngokusebenzisa le Webhusayithi, uyaluvuma olu dluliselo.
Ukuhlaziya Iinkcukacha Zakho
Ukuba nayiphi inkcazelo oye wayinikela kwi-OUP itshintshile umz. ukuba uye watshintsha iadresi yakho yeimeyile, nceda usichazele iinkcukacha ezichanileyo ngokuqhagamshelana nathi.
Utshintsho kwiPolisi yethu Yabucala
Sinelungelo lokwenza utshintsho kule polisi yabucala. Naluphi utshintsho esinokulwenza kule polisi yabucala luza kufakwa kweli phepha yaye, xa kuyimfuneko, uza kwaziswa ngeimeyile.
Le polisi yabucala ibhalwe ngolwimi lwesiNgesi. Ukuba le polisi yabucala iguqulelwe kulo naluphi olunye ulwimi, uhlobo lwesiNgesi lulo olusebenzayo.
Uyavuma ukuba le polisi yabucala ilawulwa ngokukhethekileyo ngokuvumelana nemithetho yeenkundla zaseNgilani nezaseWales.
Esi silumkiso somthetho senzelwe ngokukhethekileyo le webhusayithi ithi oxforddictionaries.com ("iWebhusayithi") needomeyni zayo ezingaphantsi yaye zilawula ukusebenzisa kwakho le Webhusayithi needomeyni zayo ezingaphantsi. Ngokusebenzisa le Webhusayithi, uyazivuma izinto ezichazwe kule nkcazelo.
Ungazifikelela iinxalenye ezithile zale Webhusayithi ngaphandle kokubhalisa okanye unikezele ngeenkcukacha zakho kwi-Oxford University Press ("OUP", "thina", "sonke" okanye "eyethu").
Njengoko inkcazelo ekwiWebhusayithi isenokungapheleleli, iphelelwe lixesha okanye ingachani yaye ingaquka ukungachani kubugcisa okanye iimpazamo ekutayipheni, i-OUP inelungelo lokuhlaziya iWebhusayithi ngokokubona kwethu. Ngoko, inkcazelo enjalo isenokutshintsha okanye ihlaziywe ngaphandle kokwaziswa.
Sinelungelo lokwenza utshintsho kwesi silumkiso somthetho. Naluphi utshintsho esinokulwenza kwesi silumkiso somthetho luza kufakwa kweli phepha ibe, xa kuyimfuneko, siza kwazisa ngeimeyile. Amanye amalungiselelo esi silumkiso somthetho angodlulwa zizilumkiso zomthetho ezichazwa ngomlomo okanye yimimiselo echazwe kumaphepha athile akwiWebhusayithi.
Amagama Omsebenzisi Neephaswedi
Apho ubhalise khona kwiWebhusayithi waze wanikwa igama lomsebenzisi nephaswedi, uyavuma ukuba awuyi kulinikezela komnye umntu igama lakho lomsebenzisi kunye/okanye iphaswedi. Ukuba kuye kwakho ukudizwa kwegama lakho lomsebenzisi kunye/okanye iphaswedi, uyavuma ukuba uza kusazisa kwakamsinya ngolo dizo ukuze i-OUP ithathe amanyathelo afanelekileyo okhuselo ize ikunike igama lomsebenzisi elitsha nephaswedi.
Ukusetyenziswa kwesiqulatho seWebhusayithi
Ukhangele, uhlole, ukhuphe, uze ubonise iinxalenye zesiqulatho seWebhusayithi;
ukugcina iinxalenye zesiqulatho seWebhusayithi ngokwe-elektroniki;
kunye/okanye ukuprinta iikopi ezinganye zeenxalenye zesiqulatho seWebhusayithi
Kwisenzo ngasinye, uthobela naluphi uthintelo oluthile oluvela kumaphepha athile eWebhusayithi. Awunakususa okanye utshintshe izilumkiso zamalungelo okukopa okanye inkcazelo yobuqu yokungabi nabango njengoko zibonakala kwiWebhusayithi; wenze iikopi eziprintwe ngokulandelelanayo okanye ze-elektroniki ezikhutshwe ngobuninzi kwisiqulatho esithintelweyo ngayo nayiphi injongo ngaphandle kwaleyo ivunyelwa ngumthetho okanye egunyaziswe yi-OUP; ungenakubonisa okanye usasaze nayiphi inxalenye yemathiriyeli kuyo nayiphi inethiwekhi ye-elektroniki, kuquka ezingaphelelanga kwi-Intanethi nakwi-World Wide Web; ungenakuvumela nawuphi umntu afikelele okanye asebenzise imathiriyeli yaye/okanye asebenzise zonke okanye nayiphi inxalenye yemathiriyeli eyisebenzisela ukuyithengisa.
Ukuba usayinela ukufumana amaphephandaba okanye urhumela iindaba zewebhu awunakuyisebenzisela ukuyithengisa imathiriyeli oyithunyelelwayo. Awuna:
Kususa okanye utshintshe izilumkiso zamalungelo okukopa okanye inkcazelo yobuqu yokungabi nabango njengoko zibonakala kwizinto ezithunyelwa kuwe;
kukopa ngolandelewano izinto eziprintiweyo okanye ze-elektroniki ezikhutshwe ngobuninzi kwisiqulatho esithintelweyo ngayo nayiphi injongo ngaphandle kwaleyo ivunyelwa ngumthetho okanye egunyaziswe yi-OUP;
kubonisa okanye usasaze nayiphi inxalenye yemathiriyeli kuyo nayiphi inethiwekhi ye-elektroniki, kuquka ezingaphelelanga kwi-Intanethi nakwi-World Wide Web;
uvumele nawuphi umntu afikelele okanye asebenzise le mathiriyeli; kunye/okanye
usebenzise zonke okanye nayiphi inxalenye yemathiriyeli uyisebenzisela ukuyithengisa.
Thina kunye/okanye abaniki layisenisi bethu singabanini bawo onke amalungelo obunini kwiWebhusayithi, ibe iWebhusayithi kunye neemathiriyeli ezikwiWebhusayithi zikhuselwe yimithetho yobunini yasehlabathini jikelele kuquka imithetho yamalungelo okukopa nawophawu lokurhweba. Ngokuphathelele imimiselo yesi silumkiso somthetho nazo naziphi ezinye izivumelwano zelayisenisi phakathi kwakho ne-OUP, onke amalungelo aloluhlobo athintelwe yaye akukho mathiriyeli enokukotshwa, itshintshwe, ipapashwe, isasazwe okanye ikhutshwe ngaphandle kwangaphambi kwemvume ebhaliweyo. I-Oxford University Press, i-OUP, i-Oxford kunye/okanye nawo nawaphi amanye amagama eemveliso okanye iinkonzo ezinikelwa yi-Oxford University Press ekubhekiselwa kuzo kwiWebhusayithi ziluphawu lokurhweba okanye zibhaliswe njengophawu lokurhweba le-Oxford University Press.
Ukungemi noko kuchazwe apha ngasentla yaye kuyimfuneko, amalungelo okukopa kwinto nganye evela kwiWebhusayithi inamalungelo omnini obhalwe kwifestile ‘Yeenkcukacha Ezibonisiweyo’ ngokwaloo mzekeliso. Onke amalungelo athintelwe. Akukho mzekeliso osuka kwiWebhusayithi omele ukotshwe, utshintshwe, upapashwe okanye usasazwe.
Iilinki eziya kwezinye iiwebhusayithi zibonelwe ngu-OUP ngethemba lokuba zezenkcazelo kuphela. I-OUP ayinabango kwimathiriyeli ekhoyo kuyo nayiphi iwebhusayithi elinkwe kule Webhusayithi.
Ukongeza, ilinki eya kwiwebhusayithi engeyiyo eye-OUP ayithethi kuthi u-OUP uyayixhasa okanye uyayamkela nayiphi imbopheleleko yesiqulatho, okanye ukusetyenziswa kwayo, iwebhusayithi enjalo okanye iimveliso kunye/okanye neenkonzo ezinikelwa kulo webhusayithi. Kuxhomekeke kuwe ukuthatha amanyathelo okuqinisekisa ukuba nakuphi okukhethayo ukukusebenzisa akunazo ezi zinto zifana nezi iintsholongwane, imibungu, i-trojans nezinye izinto ezitshabalalisayo.
Ngoxa sizama ukuqiniseka ukuba iWebhusayithi ngokuqhelekileyo ibekho iiyure ezi-24 ngosuku, asisayi kuba natyala ngaso nasiphi na isizathu sokuba iWebhusayithi ingafumaneki nangaliphi ixesha okanye ithuba.
Ufikelelo kwiWebhusayithi lungayekiswa okwexeshana yaye ngaphandle kwesilumkiso xa kunokubakho usilelo kwisistim, uhlaziyo okanye ulungiso okanye nasiphi isizathu esingenakusilawula.
Iinxalenye zesiqulatho ezikwiWebhusayithi yethu eyenzelwe umsebenzisi
zingavumela abasebenzisi bafake isiqulatho esisesabo. Isiqulatho esifakwe ngabasebenzisi akunyanzelekanga ukuba sibonise izimvo ze-OUP. Ngokufaka isiqulatho kwiWebhusayithi yethu, uyavuma ukuthobela iziKhokelo zethu. Uyaqinisekisa ukuba nasiphi isiqulatho esinjalo sihambelana neziKhokelo yaye unawo onke amalungelo afunekayo kwiimathiriyeli ezinjalo yaye ezo mathiriyeli zinjalo aziyi kubangela kungathathelwa ngqalelo nawaphi amalungelo obuqu okanye obunini aye nawuphi na umntu, iimathiriyeli ezinjalo azinazinto zobugcisa ziyingozi (kuquka, ezingaphelelanga kwezi, iintsholongwane zeekhompyutha, iziqhushumbisi zesistim, Iinkqubo eziyingozi, imibungu, iikhomponenti eziyingozi, inkcazelo eyonakeleyo okanye ezinye iisoftwe eziyingozi okanye inkcazelo eyingozi).
I-OUP inelungelo, ngokokubona kwayo, lokuba ihlole, ilungise okanye icime nasiphi isiqulatho esifakwe ngumsebenzisi u-OUP asijonga njengesingavumelaniyo nezi ziKhokelo (ukudibana) yaye/okanye ezihlebayo, ezingekho mthethweni, ezisongelayo, ezingamanyala okanye ezithandabuzekayo. Ukungemi noko kuchazwe apha ngasentla, u-OUP akathathi bango yayo nayiphi imbopheleleko okanye ityala laso nasiphi isiqulatho esifakwe nguwe okanye abanye ngabasebenzisi beWebhusayithi. Sikwanelungelo lokukutyhila ukuba ungubani kubantu bomthetho okanye kuye nawuphi mnye umntu othi ufake nasiphi isiqulatho kwiWebhusayithi yethu esiqulethe ekwaphulwa kwamalungelo obunini okanye amalungelo abo abucala.
Ilungelo le-OUP lokusebenzisa isiqulatho esenzelwe umsebenzisi
Nasiphi isiqulatho osifakayo kwiWebhusayithi yethu siza kujongwa njengesingesosamfihlo. Isigqibo se-OUP sokukuvumela ukuba usebenzise le Webhusayithi ngokuvumelana nesi Silumkiso Somthetho (bona Ukusetyenziswa kwesiqulatho seWebhusayithi apha ngentla),i-OUP ikunika imvume, yehlabathi lonke, engenokwaphulwa, engenantlawulo, edlulisekayo, enelayisenisi yokusebenzisa ekungabelwana ngayo, elungiswayo, ehlalutywayo, epapashwayo, eboniswayo, enesiqulatho ekunxibelelwana ngaso size sisetyenziswe nguwonkewonke (okanye nayiphi inxalenye yaso) kuzo zonke iilwimi kulo naluphi uhlobo okanye nayiphi indlela esidluliselwa ngayo ekhoyo okanye engekabikho (yaye amalungelo anjalo anikwe ilayisenisi engaphantsi). Uyawathobela nawaphi amalungelo okuziphatha kuso nasiphi isiqulatho osifakayo kwiWebhusayithi yethu (kuquka kodwa ezingaphelelanga kwilungelo lokuzichaza njengombhali). Singakuhlawula kodwa uyavuma ukuba asibophelekanga ukuba sikwenze oko.
Sinelungelo lokuqwalasela zonke izinto ezifakwayo kwiWebhusayithi ukuze sibone nantoni na engqubana nesi silumkiso somthetho kunye/okanye iziKhokelo; ngenxa yoko, ezinye zezinto ezifakwayo zingathunyelwa kulinganiselo ngaphambi kokuba zipapashwe ibe, ngenxa yoko, kungakho ulibaziseko ekuveleni kwalonto ifakwe kwiWebhusayithi.
Siza kugqiba, ngokokubona kwethu, enoba kuye kwakho ukwaphulwa kwesilumkiso somthetho okanye iziKhokelo [ukudibana] ngokusebenzisa kwakho le Webhusayithi. Xa kwenzekile kophulwa esi silumkiso somthetho okanye iziKhokelo, singathatha amanyathelo ngokwendlela esibona kufaneleke ngayo kuquka kodwa ezingaphelelanga kwezi ukubhloka ngaphandle kwesilumkiso okanye ingxoxo namphi umsebenzisi ongasithobeliyo esi silumkiso somthetho okanye iziKhokelo, size sizisuse zonke izinto zakhe nogalelo lwakhe.
Ukusilela ekuthobeleni esi silumkiso somthetho kunye/okanye iziKhokelo kungaphumela ekurhoxisweni ngokupheleleyo okanye okwexeshana ufikelelo lwakho kunye/okanye ilungelo lakho lokusebenzisa iWebhusayithi.
Iiwebhusayithi Ezikuhlobo Lwehlabathi
Uyaluqonda uhlobo lwehlabathi elulo le Webhusayithi ibe ngoko, uyavuma ukuhambiselana nemithetho yasekuhlaleni xa usebenzisa le Webhusayithi.
Inkcazelo esiyipapasha kwiWebhusayithi inganeembekiselo okanye ugcino lweembekiselo kwiinkonzo zethu kunye/okanye iimveliso zethu esizinikelayo ezingachazwanga okanye ezingekhoyo kwilizwe lakho. Iimbekiselo ezinjalo azithethi kuthi sithambekele ekwaziseni ezo nkonzo kunye/okanye iimveliso kwilizwe lakho.
Esi silumkiso somthetho sibhalwe ngolwimi lwesiNgesi. Ukuba esi silumkiso somthetho siguqulelwe kulo naluphi olunye ulwimi, uhlobo lwesiNgesi lulo olusebenzayo.
Uyavuma ukuba esi silumkiso somthetho silawulwa ngokukhethekileyo ngokuvumelana nemithetho yeenkundla zaseNgilani nezaseWales. Ukungemi noko kuchazwe apha ngasentla, ayikho into kwesi silumkiso somthetho eza kuthintela u-OUP angayi kuyo nayiphi inkundla ukuze athathe inyathelo ngokwaphulwa kwamalungelo obunini.
Uphawulo kwimo yobunini
I-Oxforddictionaries.com needomeyini zakhe ezingaphantsi zingaquka amanye amagama athetha ngokuphandle ngemo yobunini njengamaphawu okurhweba okanye ezinto ezifana nezo. Lonto bayiqukileyo ayithethi kuthi baye bafuna iinjongo zomthetho zokungabi ngumnini okanye into ebonisa oko nokuba yeyiphi na enye into egwebayo ngokuphathelele imo yomthetho. Kwezinye iimeko apho umhleli enobungqina bokuba igama linemo yobunini oku kuboniswa koko kufakiweyo kwelo gama kodwa akukho kugweba ngokuphathelele imo yomthetho yendlela awenziwe ngayo okanye izinto ezisitheleyo zalo magama.
Iimbono kunye neenkcazelo ezikhoyo ezifakwe kwibhlog ye-OxfordWords namagqabaza akuyomfuneko ukuba zibonise iimbono okanye ukuma kwe-Oxford University Press.